Just rememberance the feeling :
@ 28th Jan 2011 to 14th Feb 2011 ,
မြန်မာပြည် ပြန်တဲ့ သုံးခေါက်မှာ တတိယတစ်ခေါက်ပဲ ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ အိမ်ကို ရောက်ပါတော့တယ်..။ ကျောင်းတစ်ပါတ် အပျက်ခံပြီး ကျွန်တော်နဲ့ အတူတူ လိုက်ပြန်တဲ့ ညီမလေး၊ တစ်နေ့ သုံးခါငိုပြီး ကျောင်းကို ပြန်သွားတဲ့ ညီမလေး၊ သူ့အလုပ်နဲ့သူတောင် မအားတဲ့ကြားက ကျွန်တော်လိုချင်တာ လိုက်လုပ်ပေးတဲ့ ညီမလတ်၊ နောက် ဖေဖေ နဲ့ မေမေ..။ ပြီးတော့...။
ကျွန်တော် မြို့ကလေးဆီ ပြန်ရောက်တာနဲ့ ခွင့် မရလည်း ချက်ချင်း ကားလက်မှတ်ဝယ်ပြီး ကျွန်တော့်ကို လာတွေတဲ့ TNAung, နောက် ကျွန်တော် ချစ်တဲ့ ကျွန်တော့် ငယ်သူငယ်ချင်းတွေ၊ ကျိုက်ထီးရိုး ကို ကျွန်တော်နဲ့အတူတူ ဘုရားဖူး လိုက်ကူတဲ့ NNyo(SWAung)...။ နောက်...။
Everything is just recorded!
Now I come back again!
အိပ်မက်တွေထဲတောင် အိပ်မက်ဆိုးမက်နေတယ်ဆိုတော့ .... :-\_
အသံမဲ့အော်သံတွေကို ပင်လယ်ကမ်းခြေမှာ ရပ်ပြီး နားထောင်သွားတယ်
you do write poem too!!!
ကဗျာ ဆိုပြီးတော့ ခေါင်းစဉ်မတပ်လိုပါဖူး...။
တွေးမိတာလေးတွေနဲ့ အချိန်တစ်ခုမှာ ခံစားမိတာလေးကို မှတ်တမ်းတင်မိရုံပါ...။ Normally just playing words for thinking and learning :P